Walaac cusub oo ka jirra dowladaha Gacanka Carabta |
Cabdijabaar Sh. Axmed — August 8, 2015
Inkastoo ay yihiin dalalka ugu horumarsan uguna ammaan badan dunida carabta, lixda waddan ee Gacanka Carabta, ayaa hadda waxaa soo foodsaartay laba qatar weerar oo argagixiso oo uga imanaysa Suniyiinta iyo Shiicada mayalka adag. July dhamaadkeeda, Bahrain ayaa aragtay weerarkii ugu waynaa ee lagu qaado boliiskeeda. bambaano ayaa ku qaraxday baabuur boliis ooo dishay laba boliis qaar kalena dhaawacday.
Waxay rumaysan yihiin in qalabkan ugu dambeeyay uu ka yimid dagaallamayaal Shiica ah oo jooga dalka Ciraaq, oo ay maalgeliyeen isla markaana tababareen ciidanka ilaalada kacaanka Iran. Baxreyn waxay muddo dheer ku eedeynaysay Iran, gaar ahaanna shakhsiyaad ka tirsan hay’addeeda sirdoonka, inay wadaan rabshado dagaal wata oo ka dhaca dalkaasi jasiiradda ah. Dad mucaaradka ka tirsan waxay sheegayaan in dowladdu ay mar walba ka hadasho halistan iyadoo marmarsiinyo uga dhiganaysa inay cagta mariso muddaharaadyada, ayna cabburiso wixii shiica ah ee ka hor yimaad boqortooyada Sunniga ah iyadoo ay Shiicadu tahay tan ugu tirada badan dadka dalkaas u dhashay.
Laakiin diblomaasiyiinta reer galbeedku waxay walaaca la wadaagaan Baxreyn, kaddib markii dhowaanahan daboolka laga qaaday waxyaabo badan oo qarxa iyo hub xagga badda la soo mariyay iyo dariiqa ka yimaad xagga Sacuudiga, in Baxreyn ay bartilmaameed u tahay xagjirayaal Shiica ah oo dalka dibaddiisa jooga. Sacuudi Careebiya iyo Immaaraadka Carabta ee Midoobay waxay sidoo kale aad uga shakisan yihiin dhaqdhaqaaqa ay Iran ka waddo gobolka, taasoo ah sababta ay ciidammadoodu sida firfircoon gacanta u siinayeen ciidammada Yemen inay jabhadda Xuutiyiinta ee la sheego inay Iran taageerto ay ka saaraan magaalada Cadan.
Hase yeeshee halista argagixiso ee haatan gobolka ugu weyn waxay ka imanaysaa Sunniyiinta jihaad-doonka ah ee isku magacaabay dowladda Islaamiga ah. Muddo shan toddobaad gudahood ah xilligan la joogo kooxda gobolka Najd, oo xiriir la leh Daacish, waxay fuliyeen saddex weerar oo is-qarxin ah, laba ay Sacuudiga ka fuliyeen iyo mid ay ka fuliyeen dalka Kuwait. Isu-geyn, 67 qof ayaa ku dhimatay boqollaal kalena way ku dhaawacmeen. Weerar kasta waxaa lala beegsanayay muslimiinta Shiicada iyo Sunniyiinta oo masaajidyadooda lagu laayay.
Dadka wax lafagura waxay la tahay in ujeeddada qaraxyadaasi ay tahay in la kiciyo jawaab dagaal oo ka timaad Shiicada, si loo qarxiyo dagaal diineed oo Sunniyiin badan oo Khaliijka ka tirsan ay ciidan u noqdaan kooxda Daacish. Kaddib markii la garaacay Sacuudiga iyo Kuwait, khubaradu waxay rumaysan yihiin in Baxreyn ay u muuqato bartilmaameedka xiga. Tirada taageerayaasha Daacish ee gobolka Khaliijka aad ayay u badan tahay, waxaana dhici karta inay aad uga badan tahay in tirooyinka rasmiga ah ay muujinayaan. Bishii July mas’uuliyiinta Sacuudigu waxay ku dhawaaqeen inay xireen 431 qof oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin Daacish, waxaana intaas dheer 93 qof oo la xiray bishii April.
Ayman Deen, oo ahaan jiray hawl wadeen al-qaacida iyo khabiir arrimaha Daacish, waxaa uu rumaysan yahay in kooxda mintidiinta ahi ay dhowaan wax ka beddeshay qorshaheeda dagaalka. Waxaa uu sheegayaa in halkii ay taageerayaashooda Sunniyiinta Khaliijka ku dhiirri gelin lahaayeen inay yimaaddan Suuriya, uu hoggaanka Daacish haatan u sheegayo inay waddammadooda iska joogaan si ay halkaas weerarro uga qorsheeyaan lagu qaado mas’uuliyiinta, dadka Shiicada ah iyo reer galbeedka.
Next post Hooyadii Isha La’ayd - Waa qiso xanuun badan oo xaqiiqo ah
Previous post Barnaamijka Cunta kKarinta: Suugo Soomaaliyeed oo La Casriyaysiiyay |Tukesomalism.com